Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: 2011
ဘာလို့ Excel မှာ မြန်မာလို ရိုက်လို့ တွက်ချက်လို့ ရသွားတာလဲ
နောင် လိုအပ်လာရင် ပြန် ကိုးကားလို့ ရအောင် တလက်စတည်း ဘာလို့ Excel မှာ မြန်မာလို ရိုက်လို့ တွက်ချက်လို့ ရသွားတာလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြပါရစေ။
Excel မှာ မြန်မာလို ရိုက်လို့ တွက်ချက်လို့ ရသွားတာ custom format မှာ "locale component" ထည်သွင်း ဖော်ပြလိုက်လို့ပါ။ သတိထားမိမှာပေါ့ [$-10000455] ဆိုတဲ့ ကိန်းစုပါ။ လေးထောင့်ကွင်းထဲ ထည့်ထားတယ်။ $- နဲ့ အစချီ ရပါတယ်။ အဲ့တာ locale component ပါ။
သရုပ်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်... [$- ] ကို ဖယ်လိုက်ရင် ...
10 00 0455 ဆိုပြီး အပိုင်း (၃) ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါဟာ (Numeral shape) + (Calendar type) + (Locale and language) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအပိုင်းက Numeral shape ကို ညွှန်းပါတယ်။
10 က Myanmar ပါ။ (10 ကို ပေးလိုက်တဲ့ အတွက် ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ တွေကို ကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ် လက်ခံဖော်ပြပေးပါတယ်။
ဒုတိယအပိုင်းက Calendar type ကို ညွှန်းပါတယ်။
00 လို့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ ပြက္ခဒိန်က အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတော့လည်း သုံည ပေါ့ဗျာ ...
တတိယအပိုင်းက Locale and language ကို ညွှန်းပါတယ်။
0455 က မြန်မာရဲ့ Locale ID (LCID) ဖြစ်ပါတယ်။
[$-10000455] ဆိုတဲ့ "locale component" ကျေးဇူးနဲ့ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ တွေ Excel မှာ လူရာဝင်ခဲ့ပါပြီ...။ :)
ဒါကို Myanmar Family ဖိုရမ် မှာ 23 DEC 2011 က ဖြည့်စွက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
NUMERAL SHAPE CODES
The numeral shape code determines what the numbers will look like in the formatted cells.
The calendar type code allows you to select which calendar will be applied to the number format.
The locale and language designation code component allows you to specify which locale should be applied to the number format. This number requires the hexadecimal value of the Locale Identifier (LCID) for the appropriate language and location.
The following table lists the locales/languages with an assigned Locale ID (LCID). The purpose of the document is to help developers who are defining NLS services (sorting, time/date formatting, and keyboards/IMEs) for locales that do not yet have native support in Windows to avoid conflict.
Note:The appearance ofalanguage/locale on this list does not indicate that Microsoft will offer support for it in the future.
Posted by Ko Gyii at 4:14 PM No comments :
Posted by Ko Gyii at 1:41 PM No comments :
Posted by Ko Gyii at 10:18 AM No comments :
Posted by Ko Gyii at 2:51 PM No comments :
Posted by Ko Gyii at 4:22 PM No comments :
အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဘဝ တည်ဆောက်လို့ မရဘူး
"အချစ်" တစ်ခုတည်းနဲ့ "ဘဝ"တည်ဆောက်လို့ မရဘူး ဆိုတဲ့ စကား လူပြောများကြတယ်။ သီချင်းတွေထဲမှာလည်း တွေ့ရတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ "ဘဝ"တစ်ခုတည်ဆောက်ဘို့ "အချစ်" တော့လိုမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ "အချစ်" တစ်ခုတည်းနဲ့ "ဘဝ" ကို တည်ဆောက်လို့ မရရင်....."ဘဝ" တစ်ခုတည်ဆောက်ဘို့ "အချစ်" အပြင် တခြား ဘာတွေလိုမလဲ သိချင်မိပါတယ်။ ဖတ်သင့်တဲ့ လင့်တွေ့ရင်လည်း ညွှန်းပါဦး...။
Posted by Ko Gyii at 2:09 PM No comments :
ဂျီမေးက ခုန်ပျံကျော်လွှား Jump to Oldest messages
ဒီနေ့ ဟိုလျောက်ကလိ ဒီလျောက်ကလိ လုပ်ရင် ဒါလေး တွေ့လာသဗျ
အပေါ်က ပုံလေး ကြည့်တာနဲ့ ဒါ ဘယ်နားက ဘာလေးလဲ ဆိုတာ စာဖတ်သူ တန်းသိမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ဂျီမေး Inbox ဖြစ်ဖြစ် All Mail ဖြစ်ဖြစ် Gmail မျက်နှာစာ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်မှာ ပြတဲ့ မေးစာရင်းပါ။ စာရင်း အရဆို ဒီစာရင်းမှာ စာပေါင်း 4493 စောင် ရှိတယ်ဗျာ။ အခု စာမျက်နှာမှာ ပြနေတာက 1 ကနေ 50 အထိ တမျက်နှာ အစောင် ၅၀ နှုန်းနဲ့ ပြထားတယ်ပေါ့။ ► ကို နှိပ်ရင် ပိုဟောင်းတဲ့ အစောင် ၅၀ (51 မှ 100 ထိ) ကို ဆက်ပြပေးလိမ့်မယ်။ ထားပါတော့ ကျနော်က အဟောင်းဆုံးစာကို (အစောင်နံပတ် 4993 ကို) ဖတ်ချင်တယ်ဗျာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အစောင်နံပတ် 4993 ပေါ်တဲ့အထိ တမျက်နှာချင်း ► ကို နှိပ်ပြီး လှန်သွားမလား။ ရတာပဲ။ အချိန်တော့ ကုန်မယ်။ ဒီတော့ .... ပိုမြန်အောင် အခုတွေ့လာတဲ့ ခလုတ်ကလေးကို သုံးမယ်ဗျ...။ ကြည့်ပါ...။
ခုနက မေးစာရင်း 1- 50 of 4493 စာပေါ်ကို မောက်စ် တင်လိုက်ပါတယ် (နှိပ်စရာ မလိုပါဘူး)။
ဟော... Newest နဲ့ Oldest ဆိုတဲ့ စာ၂ကြောင်းပါတဲ့ drop-down menu လေး ကျလာပါတယ်။
Oldest က်ို ရွေးပြီး ကလစ်ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
ခဏစောင့်ပါ။ ... အဟောင်းဆုံး စာပါတဲ့ စာမျက်နှာက်ို ခုန်ပျံကျော်လွှားပြီး ရောက်သွားပါပြီ။
အောက်ပုံကို ကြည့်ပါ.။ စာ 4451 မှ 4493 အထိ စာစာရင်းကို ပြနေပါတယ်။ ပြောပြချင်တာ ဒါလေးပါပဲ။ အသစ်ဆုံးကို ပြန်ပြစေချင်ရင်တော့ ခုနက drop-down menu လေး ပြန်ခေါ်ပြီး Newest ကို နှိပ်လိုက်ရုံပေ့ါဗျာ...။
သိပြီးသားဆိုလည်း ဘွေမယူပါနဲ့ဗျို့...။ ကျနော်ကတော့ ဒါလေးကို ဒီနေ့မှ သိတယ်ဗျ။ သိသိချင်း ဝေမျှလိုက်ပါတယ် :)
Posted by Ko Gyii at 5:48 PM No comments :